Ku dhawaad 20kun oo Arday oo maanta u fariisatay Imtixaanka shahaadiga degaanada Puntland – GOBOLADA.COM
Ku dhawaad 20kun oo Arday oo maanta u fariisatay Imtixaanka shahaadiga degaanada Puntland
May 28, 2022 May 28, 2022 AbdukadirLeave a Comment on Ku dhawaad 20kun oo Arday oo maanta u fariisatay Imtixaanka shahaadiga degaanada Puntland
Madaxweyne ku xigeenka Maamulka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa maanta daah-furay Imtixaanka Shahaadiga ah ee Sanad dugsiyeedka 2021-2022.
Madaxweyne ku xigeenka Puntland oo Imtixaanka ka daahfuray dugsiga Sare ee Gambool ayaa hambalyo u diray Ardayda saaka u fadhiisatay Imtixaanka oo ka kooban 18550 Arday oo isugu jira Fasalka 4-aad ee dugsiga Sare iyo Fasalka 8-aad ee dugsiga dhexe.
Dugsiga sare waxaa sanadkan u fadhiistay Imtixaanka 5940 Arday oo kala ah 3667 Wiil iyo 2273 gabdhood, halka dugsiga dhexe ay u fadhiisteen 12610 arday oo kala ah 5308 gabdhood iyo 7302 Wiil, Imtixaanka ayaa saaka ka furamay 136 goobood iyada oo ay fulinayaan 948 Macalin iyo 189 hawl-wadeen.
Kusimaha Madaxweynaha Ahna Madaxweyne ku xigeenka dowladda Puntland Mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa uga mahadceliyay bahda waxbarashada shaqada wanaagsan ee ay hayaan,
‘’Waxaan u mahadcelinayaa guud ahaan bahda Wasaarada Waxbarashada Puntland oo runtii marwalba heegan u ah inay horumariyaan waxbarashada iyo manaahiijta Puntland, Anigoo og in duruufo badan ay jiraan hadana marwalba heegan ugu jira sidii waxbarashadeenu u sugnaan lahayd’’.
Dhanka kale Kusimaha Madaxweynaha ayaa xusay in dowladda ay ka go’an tahay horumarinta waxbarashada.
‘’Dowladda way ka go’antahay inaan muhiimad gaar ah siino waxbarashada, dal walba oo dunida ah horumarkiisu wuxuu ku xidhan yahay heerka aqoonta ee dadka ku nool’’.
Madaxweyne ku xigeenka ayaa faray masuuliyiinta gacanta ku haya hawshan inay feejignaan dheeri ah muujiyaan mudada Imtixaanku socdo.
Ciyaarta Xiisaha badan ee Caawa dhexmari doonta Liverpool & Real Madrid
Galmudug :in ka badan 3 kun oo Arday oo maanta u fariisatay Imtixaanka shahaadiga